Showing 21-40 of 179 items.
सिरहा, माघ १३ गते ।जिल्लाको मटिहानी नगरपालिका&ndash;८ बाट २१ तोला सुनसहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका ४ का २३ वर्षीय दीपक महतो छन् । सशस्त्र प्रहरीले १६ लाख २४ हजार ६०६ रुपैया
पर्साका दुई स्थानमा आगलागी, ८ लाख बराबरकाे धनमाल नष्ट
सिरहा,पुस २७ गते । २७ पुस, वीरगञ्ज । पर्साका छुट्टाछुट्टै दुई स्थानमा आगलागी भएको छ । घटनामा ८ लाख बराबरका धनमाल जलेर नष्ट भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकामा आगलागी भएको हो । शनिबार दिउँसो वीरगञ्ज&ndash;१३ नारा�
बाराको जीतपुरसिमरामा दुई करोड ७४ हजार बेरुजु, फछ्र्योटमा वेवास्ता
सिरहा,पुस २३ गते । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रु दुई करोड ७४ हजार बेरुजु देखिएको भन्दै चासो बढाएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा पदाधिकारीको तलबभत्तादेखि ठेकेदारसँग असुलउपर गर्�
सिरहा,पुस २३ गते । झन्डै २ सय गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ऋण दिएर उनीहरूबाट चर्को रकम असुल गरी ५ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा राजपाका केन्द्रीय सदस्य रामबाबु यादवमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन सुरु गरेको छ । यादव घरजग्गा कारोबारीस
सप्तरी भन्सार : कर्मचारी अभावले लथालिङ्ग, भन्सार असुली घट्यो !
सिरहा,पुस २१ गते । &nbsp;सप्तरी भन्सार कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव चरम देखिएको छ । कर्मचारी अभावका कारण राजस्व असुली प्रभावित भएको छ । सप्तरीमा एक मात्र भन्सार कार्यालय छ । जिल्लाको सिमावर्ती क्षेत्र तिलाठी&ndash;कोइलाडी गाउँपालिका �
साढे चार महिनामा ६ हजार सवारीधनी कारबाहीमा,करोडौको राजस्व असुल
महोत्तरी । महोत्तरीमा पछिल्लो साढे चार महिनामा ट्राफिक प्रहरीले पाँच हजार ८९४ सवारीधनीलाई कारबाही गरी तीन करोड आठ लाख ५६ हजार रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बर्दिवासको तथ्यांकअनुसार गत साउनमा �
धार्मिक समुदायबीच सद्भाव को संदेश दिदै बिद्यार्थी र एकल बिध्वा महिलाहरु लाई न्यानो कपडा वितरण
अजय मिश्र,कृष्णनगर, कपिलवस्तु। धार्मिक समुदायबीच सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्नका लागि राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल र मोहम्मद बिन राशिद अलमक्तुम संस्था ले कृष्णनगर नगरपालिका,शिवराज नगरपालिका र विजयनगर गाउपालिका का केहि समुदायिक
१३ लाख अवैध रकमसहित एकैपरीवारका दुईजना पक्राउ
१३ लाख रकमसहित सौरभ सोनी र विनोदकुमार सोनी पक्राउ परेको हो ।सुनको कारोबार गर्दै आएका बाबुछोरालाई प्रहरीले नेपालगन्ज&ndash;२, घरबारी टोलबाट पक्राउ गरेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका मुद्दा फाँट इन्चार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक �
उपनिर्वाचनः सिरहामा ७१ प्रतिशत मत खस्यो
सिरहा,मंसिर १४ गते। सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका १२ बेलहामा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ । श्री बिष्णु चरण श्रेष्ठ मा.वि बेल्हामा जम्मा १ हजार १ सय ७० महिला र ७ सय ६३ पुरुष गरि जम्मा १ हजार ९ सय ३३ मत खसेको छ । यस्तै आधारभ�
प्रदेश २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशः मठ–मन्दिरमा मात्रै २ अर्ब
स्थानीय तहका योजना पुस्तिका र सम्बन्धित मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश&ndash;२ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले मठ&ndash;मन्दिर निर्माण र मर्मत शीर्षकमा २ अर्ब रुपैया सिध्याएका छन् । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका&nd
किर्ते हस्ताक्षर गरेर दुई बैङ्कबाट २० लाख चोरी, ६ जना पक्राउ
काठमाडौँ । खातावालको सही किर्ते गरेर जनता बैङ्क र एनआइसी एसिया बैङ्कबाट लाखौँ रकम झिक्ने ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले यस प्रकरणमा ६ जनालाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरे । यस
मिर्चैया प्रहरीद्वारा ९ हजार भन्दा बढी अवैध गाँजाका बोट नष्ट
गणेश कुमार शर्मासिरहा । मिर्चैया नगरपालिका वडा नं. ९ मा बिशेष सुराकीको अधरमा विभिन्न स्थानमा लगाईएको अवैध गाँजा खेती फडानी गर्ने कार्यलाई मिर्चैया प्रहरीले निरन्तरता दिएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैया र सशस्त्र प्रहरी